Nemutemo, Adobe ichavhara ese maakaundi evashandisi vayo muVenezuela | Linux Vakapindwa muropa
Nemutemo, Adobe ichavhara ese maakaunzi evashandisi vayo muVenezuela
Darkcrizt | | Updated on 11/10/2019 00:26 | Noticias
Adobe, muAmerican software muparidzi, vhara maakaunzi ako ese kuVenezuela kutevedzera mutemo weUS. Kusiya zviuru zvevashandisi vasina kuwana Photoshop uye Acrobat Reader. Chirevo ichi chakapihwa nehurumende yeUnited States, kubva ku Executive Order 13884, iyo inoshanda mhedzisiro yekurambidza anenge ese mashandiro nemasevhisi pakati pemakambani, masangano nevanhu MaAmerican muVenezuela.
Kuti uteedzere odha iyi, Adobe haina imwe sarudzo kunze kwekudzima maakaundi ese muVenezuela. "Yakadaro kambani mugwaro rakaburitswa neMuvhuro. “Tinokumbira ruregerero nekukanganisa kupi zvako kunogona kukukanganisai. «Zvakare zvakataurwa mutsamba dzakatumirwa kune vashandisi.
Muna Nyamavhuvhu, hutongi hwaDonald Trump hwakapa chirango kurwisa hurumende yemutungamiri weVenezuela, Nicolas Maduro, nemhosva yekupamba chigaro chemutungamiri wenyika nekutyora kodzero dzevanhu pamusoro pevagari vemunyika.
Ichi chirevo chepamusoro chinotarisira kudzivirira makambani eUS kuti asaite bhizinesi zvakananga uye zvisina kunangana, nehutongi hwaNicolás Maduro, inotsanangura danho reAdobe rekudzima kunyoreswa kwaro kwese munyika.
Kana iwe ukashandisa shanduro dzekare dzeAdobe maapplication, unogona kumhan'arirwa
Adobe yakati haigone kudzosera maVenzuel nekutenga kwavo, sezvo zvaizosanganisirawo mari yekuchinjisa iyo inotyora masanctions eUS.
Inotizve "Executive Order 13884, inoraira kumiswa kwechiitiko chero chipi zvacho nemasangano, kusanganisira kutengesa, sevhisi, rutsigiro, kudzoserwa mari, zvikwereti, nezvimwe. «. Kunyangwe mahara kuwana kune izvo zvigadzirwa yakavharwawo kuvaVenzuelan vagari.
Shanduko dzeAdobe dzichaitika muna Gumiguru 28. Vashandisi veVenezuela vane kusvikira musi iwoyo kurodha pasi yavo data yakachengetwa muAdobe software.
Mushure meizvozvo, maakaundi ese eVenzuelan aizove akaremara. Nhau dzakaipa dzevagari vemuVenzuelan dzakasimbiswa nenyaya yekuti Adobe yakasarudza kunyorera gore modhi chete yezvazvino vhezheni yezvigadzirwa. Adobe zvakare inoti hazvizoite kutenga software yepamoyo muchitoro kana paAdobe.com.
Nguva yekumirira kuti uwane account yako zvakare haina kutaurwa. Tinofanira kumirira manejimendi eTrump kuti achinje pfungwa. «Mutemo Wemutemo 13884 wakaburitswa pasina zuva rekupera; iyo sarudzo yekuibvisa ndeye chete Hurumende yeUnited States. Ticharamba tichiongorora mamiriro ezvinhu uye toita zvese zvatinogona kudzorera mabasa muVenezuela mutemo uchangobvumira, ”Adobe akanyora kudaro.
Uye ndizvo here izvi Haisi yekutanga danho rehurumende yeUnited States kurwisa Venezuela, sezvo yakamboisa zvirango zvakaomarara mumakore maviri apfuura kumanikidza Maduro kubva pasimba.
Kunyangwe hazvo matambudziko ehupfumi eVenezuela akatangira matanho aya, akawedzera mamiriro pasi. Zvisinei nezvirango, Maduro akaramba kusiya chigaro uye achiri kuwana rutsigiro rwemari kubva kuRussia neChina.
Dzvinyiriro yakawedzera mukutanga kwaNyamavhuvhu sezvo masanctions matsva kubva kuWashington akamisa pfuma yehurumende yeVenzuel muUnited States uye kupedza kutengeserana nedzimwe nyika, nechinangwa chekumanikidza Mutungamiri Maduro kuti abve.
Adobe haana kana kumwe kutaura zvaakaburitsa gwaro rekutsigira, Asi kambani yebasa revatengi yeTwitter account yakabata zvimwe zvichemo.
Kana mushandisi ari kunze kweVenezuela atsauswa, Adobe inokurudzira vashandisi kuti vaone uye vachinje kero yenyika muaccount yavo.
«Kero yako yemagariro yeAdobe account ID ichiri kuVenezuela?
Tinogona kuratidza izvi kwauri nekuti ungangoda kushandura kero yenyika yeAdobe account. «
Mamwe makambani ehunyanzvi aive atotora matanho akafanana. Vamwe vashandisi veTwitter vakashuma kuti TransferWise, yeUK-based online mari yekufambisa sevhisi, yakatora matanho akadaro ndokutumira tsamba kune vatengi vayo muVenezuela neMuvhuro kuvaudza kuti havachakwanise kushandisa sevhisi iyi mushure maGumiguru 21..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Nemutemo, Adobe ichavhara ese maakaunzi evashandisi vayo muVenezuela
Ivo vanoti zvematongerwo enyika sainzi, asi pasina kupokana inhema! Hupfumi hwakadzikira kuita chishandiso chekubira uye kubiridzira !! uye "democracy" muhure riri pabasa !! (neruregerero rwemahure).
Kutyisidzira kwaVaTrump: dzimwe nguva anovaitira uye dzimwe nguva haaite.
Chinhu chega chinogadziriswa naVaTrump nehutsotsi hwavo kupatsanura nyika yavo uye kuita kukuvara kusingagadzirisike kwairi mune zvehupfumi. Kune avo vanokwidza mitero uye avo vanorayira - European Union muenzaniso - uye kwatove nenhamba zhinji dzenyika, kwete Venezuela chete
Kune dzimwe nzira dzemahara, vanhu veVenzuelan havadi adobe.
Izvo hazvisi pamutemo uye humbavha hwevatengi vakabhadhara rezinesi ravo.
Iwe haugone kuvimba nemakambani senge Adobe. Chokwadi ndechekuti hapana kambani yeUS inopa chengetedzo zvekare.
"Adobe yakati haikwanise kubhadhara veVenzuel nekutenga kwavo, nekuti zvaizosanganisirawo kuendesa mari inopesana nezvirango zveUS." Izvi zvinorevawo here kuti zvikwereti zveVenzuelan kuUS hazvigone kubhadharwa futi? Kunyangwe iri Venezuela, mitero kuEurope kana China, ... kana chero, vanoisa mupengo mukutarisira xD Ko ivo maAmerican ivo pachavo havazive nyonganiso yavari kuisa nyika mukati, vaisanganisira. Kuzvimiririra kwetekinoroji kuri kudiwa nekukurumidza, kungave kwemvumo yemishonga, chengetedzo kana, sezvatiri kukurukura mumaforamu aya, software.
Jose Manuel Moreno Arroyo chigadzikiso chemufananidzo akadaro
Adobe, isu veVenzuelan tichakuwanira iwe chinotsiva.
Mune yangu kesi:
PhotoShop -> Pave nemakore anopfuura matanhatu kubvira ndachinjira kuGIMP
Acrobat Reader —-> Ini ndashandisa zvakanyanya muLinux zvekuti kunyangwe iwo mazita avo haana kuverengwa.
Na Mwari, kunyangwe Donald, Barack, George II nezvikwata zvavo, zvichikonzera kukuvara kusingagadzirisike kuvanhu.
Pindura kuna Jose Manuel Moreno Arroyo
System76 inotangisa makomputa maviri neCoreboot ichitsiva iyo BIOS
Ivo vanokurudzira mutsva wekurangarira mutongi weLinux kernel